SAMOTALIS: Talooyin Horumarinta Dhaqaalaha -1
Talooyin Horumarinta Dhaqaalaha -1
Ganacsiga xorta ihi waxuu u baahan yahay suuq xor ah. Xornimada suuqu waxay u baahantay sharciyo iyo hayado ilaaliya . Dhiirigelinta suuq furan oo tartan nidaamsan leh waa furaha horumarka dhaqaale, taas waxa lid ku ah suuq in yar u xidhan oo abuura monopoly. Adeegyada daruuriga ah sida biyaha, gaasta, nalka iwm waxay u baahan yihiin qawaaniin ilaalisa xaqqa muwaadinka iyo in ayna u gacan gelin shakhsiyaad yar. Waxa ugu habboon inay noqdaan shirkado u furan dhammaan muwaadiniinta oo lahaanshahu yahay mid furan oo qof waliba inta uu doono maal gelin karo iyo xiliga uu doono.
Labels: AHMED ARWO, AHMED ARWO VIDEOS, BUSINESS, ECONOMY, NEWS, Somaliland
1438 Ramadan and Rahma 2017-21.. by Ahmed Arwo
Laylatul-Qadr is in the last ten nights of Ramadan "When the (last) ten started, the Prophet (sallallahu `alayhi wa sallam) would...